OED COVID-19 | Garsoorida
Markii aan ka warqabno arrimaha su'aal gelinaya in qof uu heli karo faa’idooyinka, waxaa sharci ahaan nalooga baahan yahay in aan fiirino. In kasta oo arrimo badan lagu xallin karo su'aalaha dabagalka degdegga ah, marar badan waxay u baahan tahay dib-u-eegis dhammaystiran oo loo maro habka xukunka. Qaar ka mid ah arrimaha guud ee u baahan xukun qaadista:
Haddii qof ka tago shaqadiisa, go'aaminta haddii duruufaha ka hor istaagayaan inay helaan faa’idooyinka
Haddii qof shaqada laga eryo, isagoo ogaanaya inay duruufaha u diidayaan inay faa’idooyinka helaan
Haddii qof uusan aqbalin shaqada loo soo bandhigo, isagoo ogaanaya in duruufaha ay u diidayaan inay helaan faa’idooyinka
Dadka u shaqeeya xarumaha waxbarashada, nasasho kasta oo udhaxeysa sanad dugsiyeedka ama shuruudaha, waa inaan xukuminaa inay u badan tahay inay qabanayaan shaqo isku mid ah nasashada kadib sidii ay horay u sameyn jireen si loo go'aamiyo inay heli karaan faa’idooyin inta lagu jiro nasashada
Haddii qof shaqo u heli waayo
Waaxda xeerarka ku meel gaarka ah, oo la ansaxiyay horaantii masiibada, waxay si weyn hoos ugu dhigtay tirada arimaha ay tahay in laga xukumo. Xitaa iyada oo ay taasi jirto, tirada badan ee dadka macaash doonka ah waxay la macno tahay inaan la kulanno tiro diiwaan ah oo arrimo u baahan in laga garsooro.
Nasiib daro, tani waxay ka dhigan tahay haddii aan aqoonsanno arrin maanta u baahan in laga garsooro, waxay u badan tahay inay qaadato 12 -14 toddobaad si loo dhammaystiro xukunka. Waan ognahay in tan aan la aqbali karin waana tan waxa aan sameyneyno:
Waxaan horey u shaqaaleynay garsoorayaal badan. Cudurka faafa ka hor, waxaan haysanay ilaa 80 garsooreyaal; waxaan hadda haysannaa 300.
Waxaan abuurnay tababaro cusub, diirada lasaaray oo ciriiri ah, yareynta waqtiga tababarka caadiga ah 15 usbuuc ilaa 5- qayb tan waxaa weeye in qareenada garsoorayaashu ay ku takhasusaan qodobo gaar ah si ay ubartaan kuwa gebi ahaanba si dhaqso leh u bilaaba xalinta arimaha.
Garyaqaannada waxay sii wadaan inay shaqeeyaan saacado dheeraad ah, iyagoo og inta qof ee iyaga ku tiirsan.
Waxaan bedelnay sida shaqada loo qoondeeyo si aan si fiican u hubinno inaan ka fogaanno dib-u-dhac ku yimaada iyo inaan hubino in dadku ay sida ugu dhakhsaha badan u xalliyaan kiisaska.
Waxaan falanqeyneynaa xogta markii aan baranayno waxyaabaha sababa dhibaatooyinka ugu badan, iyo sida aan si hufan wax uga qaban karno. Waxaan sidoo kale si xawli ah u baareynaa haddii aan sameyn karno isbeddelo kale oo geedi socod ah oo noo oggolaan kara inaan si dhaqso leh dadka ugu helno faa'iidooyin.
Waxaan helnay hab aan ku bixin karno macaashka dadka sugaya sheegashadooda in dib u eegis lagu sameeyo garsooraha si loo go'aamiyo inay u qalmaan shaqo la'aanta joogtada ah ama Barnaamijka Caawinta Shaqo La'aanta Cudurka safkmarka (PUA). Waxaan ugu yeeraynaa "Faa'iidooyinka Inta Aad Sugeyso."
Waan kula soo xiriiraynaa haddii aad heli karto "Faa'iidooyinka Inta Aad Sugeyso." Waad u qalmi kartaa haddii aad:
Waxaa loo dalbaday faa'idooyinka caymiska shaqo la'aanta ee joogtada ah (UI);
Haddii sheegashadaada loo calaamadeyn lahaa in lagu xukumo maxaa yeelay Waaxda Shaqada waa inay go'aamisaa haddii aad buuxiso shuruudaha sharciga ah si aad u hesho faa'idooyinka shaqo la'aanta caadiga ah;
Aad shaqada uga maqantahay sababta u qalanta COVID-19; IYO
Waxay u badan tahay u qalma PUA haddii aadan heli karin faa'iidooyinka shaqo la'aanta caadiga ah.
Si aad u Heshid "Faa'idooyinka Adiga oo Sugayo," dalbo Gargaarka Shaqo La'aanta Cudurka safmarka (PUA) oo noo sheeg arjigaaga: 1) sababta COVID-19 sababta aad shaqada uga maqantahay, iyo 2) taariikhda markii ugu horaysay ay saamaynta ku yeelatay sababtaas. Ka dib markaad dalbato PUA, sii wad fayl garaynta sheegashada toddobaadlaha ah ee caymiska shaqo la'aanta (UI) ee toddobaad kasta aad rabto faa’idooyinka. Ha xareynin sheegashada toddobaadlaha ah ee PUA.
Waxaan dib u eegaynaa arjigaaga PUA si aan u aragno inaad xaq u leedahay iyo in kale. Haddii aad sameysid, waan ogaanaynaa inaad uqalanto ugu yaraan hal barnaamij, taas oo macnaheeda yahay inaan bilaabi karno inaan ku siino faa’idooyinka. Waxaan ku siinaynaa macaashkaaga UI ee caadiga ah illaa inta dacwaddaada UI laga xukumayo. Haddii, dhamaadka nidaamka xukunka, ay soo baxdo inaad uqalantay faa''idada UI ee caadiga ah, waxba isbadali maayaan. Waad sii wadanaysaa helitaanka faa'idooyinka UI illaa iyo inta aad xareyneyso sheegashooyinkaaga toddobaadlaha ah oo aadna xaq u leedahay Haddii ay soo baxdo inaadan u qalmin UI-ga caadiga ah, markaa waxaan u wareejinaynaa sheegashadaada barnaamijka PUA. Haddii lacagtaada PUA ee toddobaadlaha ah ay ka sarreyso, waxaan sidoo kale kuu soo diraynaa kororka dhammaan toddobaadyadii la soo dhaafay ee aad heshay tirada UI ee caadiga ah. Waxa laga yaabaa inaad dhawr lacagood mar wada hesho.
Waxaa nalooga baahan yahay inaan idin ogeysiino inay jirto fursad taasi ku keeni karto lacag-bixin xad-dhaaf ah oo aad bixinayso. Haddii aad doorbideysid inaad sugto faa'idooyinka, loma baahno wax ficil ah.
Waxaan helay ogeysiis ku saabsan faa’idooyinka intaad sugeysid, laakiin waxaan durba qaatay faa’idooyinka UI ee caadiga ah mana haysto arrin ku saabsan xukun.
Waxaad si qalad ah ku heshay emaylka lacag bixinta ee la qiyaasayo. Ma jirto wax ficil ah oo loo baahan yahay.
Waxaan haystaa sheegasho UI oo joogto ah taas oo sugaysa xukunka oo aan horeyba u codsaday PUA. Maxaa hadda jira?
Wax ficil ah looma baahna, shaqaalaha OED waxay si firfircoon uga shaqeynayaan aqoonsiga dacwoodayaasha u qalma BWYW waxayna la socodsiinayaan codsadaha haddii ay u baahdaan macluumaad dheeri ah. Codsadaha uma baahna inuu dib u gudbiyo codsigooda PUA. Waa inaad sii wadataa feyl gareynta toddobaadlaha ah ee ku saabsan sheegashadooda joogtada ah ee UI, umana baahnid inaad caddeyn toddobaadle ah ku qorto sheegashada PUA.
Haddii codsadaha shaqo la'aan yahay sabab la xiriirta COVID-19, waa inaad xareysaa sheegashada PUA oo aad sii wadataa inaad fayl garaysato dukumiinti toddobaadle ah oo ku saabsan codsigooda UI ee caadiga ah. Haddii aadan saameyn ku yeelan COVID-19, waxay u badan tahay inaysan xaq u yeelanaynin BWYW. Haddii aad codsato PUA, waxaad u badan tahay inaad helaysid warqad diidmo ah oo la soo saaray PUA maxaa yeelay waxaad xaq u leedahay UI joogto ah. Tani macnaheeda maahan in laguu diiday BWYW wax ficil ahna looma baahna. Waa lagula soo xiriirayaa haddii aan u baahanno inaad na siiso macluumaad dheeraad ah.
Haddii aan usbuucyo ciqaab ah ku haysto codsigayga joogtada ah ee UI, miyaan u qalmayaa BWYW?
Waad dooran kartaa inaad ku dhammaysato toddobaadyadaada ganaaxa sheegashadooda joogtada ah ee UI ama aad ka codsatid faa'idooyinka barnaamijka PUA haddii aad leedahay sabab saameyn COVID-19 ah.
Mudo intee le'eg ayay ku qaadanaysaa macaamilka xaq u leh BWYW in la siiyo lacag?
Qiyaastii afar isbuuc.
Waa maxay mushaar la qiyaasayo iyo BWYW?
Lacagta la saadaalinayo waa faa iidooyinka la bixiyo maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in codsadaha u qalmaaya mid ka mid ah barnaamijyada joogtada / kordhinta ee hadda jira ama PUA. BWYW waa magaca aan adeegsanayno halkii mushaar mala-awaal ah aan ugu diri lahayn dadka reer Oregon.
Faa'iidooyinka BWYW ma u qalmaan Magdhowga Shaqo la'aanta ee Faafa ee Federaalka (FPUC)?
Haa, faa'idooyinka BWYW waa faa'iidooyinka joogtada ah ee UI. Codsadaha wuxuu helayaa lacagaha FPUC dhammaan toddobaadyada la bixin karo inta u dhexeysa usbuuca 14/20 iyo 30/20.